Maqaarka madoow: sidee ku heshaa aasaaskii saxda ahaa? - Mu'asasada Afrikhepri
Talaado, Oktoobar 20, 2020
Welcome WAQOOYINKA IYO FASHIGA
sida loo helo aasaaska aasaasiga ah?
Maqaarka madow: sida loo helo aasaaska aasaasiga ah?
Pär Julie Lombe
4 daqiiqo akhri
Lku saleysan sameynta guuleysiga, waa mid kaamil ah, xitaa muuqaal ah, cillad eber ah, iftiin leh. Sababtoo ah balaaran ee palette ee dhawaaqyada maqaarka ee u dhexeeya minka khafiifka ah ilaa madow ee qoto dheer, dhibco ama aagagga midabaynta maqaarka, maqaarka maqaarka leh ee dabiiciga ah, ma fududa in la helo asalka isku-dhafka nagu habboon.
Immisa jeer ayaad jabtay aasaaska saxaafadda ka dib si aad ugu degto shabaqa ama dukaanada oo aad u ogaatid, ugu dambeyntii, inaadan ka fikirin midabkee kugu habboon? Ma aha wax ka badan inta wax iibiya ama kuwa qurxinta leh oo leh tabar yar oo ku saabsan codadka maqaarka madow.
Marka la eego aasaaska, ma jiraan wax ka yar oo ikhtiyaarro ah sababtoo ah inta u dhaxaysa noocyada qowmiyadeed iyo noocyada guud ee kordhiyay muddadooda (30 midabyo cusub oo loogu talagalay l'Oréal sanadkii 2015 tusaale ahaan), waxaa jira daraasiin sumadaha, boqolaal alaab laftooda ayaa laga heli karaa kumanaan tixraacyo midab ah oo la heli karo! Marka sidee ku heshaa wadadaada?
Waxaad tuseysaa aasaaskaaga hadda iyo isbarbardhiggu wuxuu kuu tilmaamayaa, nooca aad dooratay ama dhammaan heerarka, mid ama kuwa u badan kuwa kugu habboon, labadaba midab iyo (mararka qaarkood) bixinta sheyga. .
Isku dheji jadwalkayga
Inta ugu badan: xog ururin weyn, goobo kala duwan oo online ah ama kuugu dhow iyo kartida aad u barbar dhigi karto qiimaha ugu hooseeya.
Ugu yaraan: taxaddar, xitaa haddii ay u muuqdaan ujeeddo ama ku saleysan fikradaha macaamilka, goobahan isbarbardhiga ayaa ah goobo ganacsiyo intabadan tixraacyada la soo bandhigo ayaa badanaa ah kuwa magacyada iyagu maalgeliyey goobta.
Shirkadaha laftooda ayaa hirgeliyay barnaamijyo ka soo qaadaya sawirkaaga ama aad wajahda kaameerad (xaqiiqda la kordhiyay), ama iyadoo loo eegayo shuruudaha xulashadaada ayaa kaa dhigi kara inaad doorato midka ugu habboon waxsoosaarkooda.
App Beauty Iman
Samee Genius ee l'Oréal
Hadh-jiheeyaha of Jane Iredale loogu talagalay taageerayaasha qurxinta macdanta
Inta ugu badan: shaqo ka socota sawir ama xaqiiq laqaban waa muuqal hadal badan oo qosol badan. Bogagga sidoo kale waxay bixiyaan macluumaad badan oo ku saabsan isku dhafka alaabooyinka.
Ugu yaraan: qiimaha tafaariiqda la soo jeediyey ama qiimaha dhammaantood iyo u gudbinta dukaamada.
Waxyaabaha loo yaqaan 'Retail vs Tutorials'.
Waqtiga ay dadka wax qora bogagga shabakadda ku daadinayaan websaydhka isbarbardhigaya ama kursiga keydka, way iska cadahay in shaashadda ka soo horjeedda, way adag tahay in la qeexo naftaada oo aad garato taxane dhan oo ah walxaha:
Cabbiraadda: midab, midab kulul ama qabow, riwaayad ah casaan ama jaale ...
Nooca maqaarka: saliida, iskudhafka, qallalan
Nooca ugu fiican ee jirka ka sameysan: kareem, budo dabacsan, budo is haysta, ul
Ceymiska: wadajir, iftiin, xoog leh
Daaweynta: oo leh ama aan lahayn SPF, anti-gabowga, fuuqbaxa
Natiijada aan rabno in aan gaarno: Matte, semi-matte, satin, lafdhabar, shinbir ...
Faa'iido codsi iyo dib-u-habeyn
Noocyada organoleptic (urta, qurxinta, muuqaalka)
Waxa ugu fiican ayaa had iyo jeer ah inaad tijaabiso sheyga oo aad ka hesho talo ka timid madax banaan oo ku sharixi doonta dhoolla-caddayn waxkastoo jira oo ay tahay inaad wax ka ogaato badeecada, haddii aan loo baahnayn laba qaado, oo cadayga lagu adeegsanayo iyo sida loogu waafajiyo daryeelka kale isla markaana loo sameeyo natiijooyin fiicnayn, oo badeecad loo adeegsado in meesha looga saaro soo-kabashada. Pro oo si gaar ah uga jawaabi doona su'aalahaaga. Sababtoo ah maya, casharradu waxba kama qabtaan waxbaridda quruxda.
Maqaallo dheeri ah oo kujira baloogga Panafrican Beauty!
Sixirka fikirka weyn - David j Schwartz (Audio)
Cunnada madow ee Afrikaanka ah ee fiidiyowga
Toddobada chakras iyo toddobada mayd ee khiyaanada leh ee Aadanaha
Waddooyinka wabiga Niil, xidhiidhka ka dhexeeya Masar qadiimiga iyo Afrika madow
Joometriiga Masar: ku-biirinta Afrika qadiimiga ah xisaabta adduunka